Hinsarmuu | Baga nagaan dhuftan! Gara fuula marsariitikeenyatti.
Hoggansa irratti qajeelummaan ummata tajaajilu
Bilbila harkaa fi miidhaa inni qabu
የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ለዎራት በመጠጥ ውኃ አቅርቦት እጦት
Ayyaana Idal-Adahaa Kan Waggaa 1437ffaa
Siyaasni Oromoo siyaasa miiraa keessaa bahuu qaba
Sticky 2018-10-30 Mohammed Nasir	Leave a comment
Siyaasni Oromoo Siyaasa Qawwee, Siyaasaa Sirbaa, Siyaasa Alaabaa, Siyaasa Halluu Dibaa Ooluu fi Siyaasa Miiraa Keessa Bahuu Qaba!
Qabsoo ummatni Oromoo jaarraa tokkoo oliif geggeessaa ture yeroo ammaa kana milkaa’uu, firii horachuu eegalee jira. Kun kan ta’eef adeemsi qabsoon Oromoo ittiin deemaa ture tooftaa qabsoo duubatti hafaa fi moofaa , siyaasa jibbiinsaa, ajeechaa, walmadeesssuu, wal adamsuu fi wal takaaluu keessa bahuun gara tooftaa qabsoo ammayyaa’aa siyaasa garaagarummaa karaa nagaa fi dimokraatawaa ta’een tarkaanfachiisuu, garaagrummaa siyaasaatiin waljibbuu fi waldamsuu dhiisuu, garaagrarummaan ilaalchaa keessumeessuu fi dhimmoota nutokkomsan irratti waltumsuun eegalamuu , walkuffisanii walbira darbuu keessaa bahuun gara waliin fuuldartti tarkaanfachuutti cehuu waan eegalameefi.
Amma Oromoon hoggansa yaada mo’ataa burqisiisuu danda’uu fi ummata isaa tokkummmadhaan sochoosuu danda’u waan argachaa dhufee jira. Yeroo kamiyyuu caalaa gaaffiiwwan siyaasaa akka sabaatti qabnu hundi kallattii sirrii qabachaa dhufanii jiru. Tokkummaan Oromoo rakkoo keesssoo fi alaatiin diigamee ture irra deebiin ijaaramaa fi cimaa dhufee jira. Siyaasni Oromoo qarqaratti dhiibamee ture gara giddu galeessatti deebi’ee jira. Oromoon yaada oromaa fudhachuu fi ittiin hogganmuu bira darbee yaada haara biyya ceesisuu danda’u burqisiiuun Oromoon gahee biyya kana ijaaruu fi hogganuu keessatti qabaachuu malus qixaan bahaachuu eegalee jira.
Dirreen siyaasaa kaleessa dhipachuu isaatiin hundaa olitti kan miidhamaa ture oromoo akka ture beekamadha. Rakkinicha bu’uura irraa hubachuun dirree siyaasaa fi dimokraasii bali’isuu fi hojii gurguddaa fi qabatamtu hojjetamaa jira. Gabaabumatti oromoon dukkana keessa ture keessa gara ifa bilisummaatti cehaa jira.
Adeemsa qabsoo Oromoon hoggansa haaromsaa waliin hiriiree geggeessaa jiru biyya bittanaa’uu jala geese kan dandamachiisee tokkomsedha. Hidhamaa kan bilisa baasedha! Jaarmiyaa siyaasaa fi hayyoota sabaa rakkoo kaleessa tureen koluu galuuf dirqamanii turanillee gara biyya abbaa isaaniitti deebi’aanii siyaasa ammayaa qabsoo karaa nagaa geggeessuuf carraa akka argatan kan karaa saaqedha.
Oromoo boqonnaa qabsoo kanarra akka gahuu fi mataa isaa olqabatee akka deemu kan isa taasise tokkummaadhaan dhaabachuu fi yaada mo’ataa qabaachuu isaatiin malee humnaa fi afaan qawweetiin akka hintaane dhugaa hundumti keenya beeknudha. Qaamni kaleessa rakkina jirurraa ka’ee qabsoo hidhannoo geggeessuuf dirqamee ture, har’a bakka injifannoo argannetti, qabsoo karaa nagaa fi ammayyaa geggeessuuf haalli mija’aan uumameefi bakka jirutti, humnootni saba kanaaf qabsoofnu dhimmoota walgaragaaruu qabnu irratti walgargaarree cehuu bakka qabnutti qabsoo karaa nagaa fi hidhannoo waliin dhahaa deemuun safartuu kamiiniyyuu fudhatama hinqabaatu. Adeemsi akkasiis tokkummaa fi qabsoo Oromoo kanduubatti deebsiu malee kan gara fuula duraattti tarkaanfachiisu miti. Adeemsi waldhahaan akkasii diina Oromoof karaa yoo bane malee Oromoof faayidaa tokkollee hinqabu.
Nuti aadaan siyaasaa Oromoo akka ammayaa’u qabsaa’aa jirra. Oromoon garaagarummaa siyaasatiin qawwee walirratti kaasee akka wal dhahu, akka waljibbu, akka wal ari’u gonkumaa hinbarbaadnu. Boqonnaa kanarra kan geenye qawweedhaan miti! Boqonnaa kanarra kan geenye sirbaan miti! Boqonnaa kanarra kan geennye Haalluu dibaa ooluudhaan miti! miiraa fi sirbaan miti! Siyaasni Oromoo Siyaasa qawwee, siyaasaa sirbaa, siyaasa alaabaa, siyaasa halluu dibaa ooluu fi siyaasa miiraa keessa bahuu qaba. Siyaasni ormoo siyaasa ititaa fi bilchaataa ta’uu qaba. siyaasa yaada mo’ataa burqisiisuu, siyaasa Ummata ofii tokkomsanii beekumsaan hogganuu, yaadaan karaa bilchina qabuun mar’itanii wal falmanii mo’uu fi mo’atamuutti akka cehu qaba. . Si’achi adeemsi karaa qabsoo karaa nagaa fi qabsoo humnaa, abshaalummaa moofaatiin deemuuf yaadamu adeemsa Diddaa Gabrummaa miti. Adeemsa Diddaa Bilisummaa yoo ta’e malee… Obolaan keenya toora irraa maqaa jirtan tooratti deebi’aa! Injifannoo wareegama dhalootaatiin argannee ol’aantummaa seeraa kabajichisuun tiksuun dirqama hunda keenyaati.
በአስር ሺዎች የሚቆጥሩ ኢትዮጵውያን ከመላው አዉሮጳ
በነገው የፍራንክፈርት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብይ የአቀባበል ሥነ-ሥር ዓት ላይ ከሚገመተው በላይ በአስር ሺዎች የሚቆጥሩ ኢትዮጵያውያን ከመላው አዉሮጳ እንደሚታደሙ ለማወቅ ተችሏል:: በዚህ መድረክ ታዳሚዎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያቀርቧቸውን ጥያቄዎች ጨምሮ ልዩ ልዩ ቀስቃሽ እና አዝናኝ ዝግጅቶችም እንደሚኖሩ አስተባባሪዎቹ ገልጸውልናል :: በመኪና ከተለያዩ የአዉሮጳ ከተሞች የሚመጡ እንግዶች እንዳይቸገሩም ከ 10 ሺህ በላይ የመኪና ማቆሚያ ስፍራዎች የተዘጋጁ ሲሆን እዛው ጀርመን የተወለዱ እና ያደጉ ከ 200 በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችም በራሳቸው አነሳሽነት ከፍራንክፈርት አውሮፕላን ማረፊያ ጀምሮ ወደ ስታዲየሙ አቅጣጫ የሚያመሩ የአውቶቡስ እና የባቡር መስመሮችን ለዝግጅቱ ታዳሚዎች በመጠቆም የበኩላችውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ታውቋል:: መስማት ለተሳናቸው ወገኖችም የዝግጅቱን ሂደት በምልክት ቋንቋ የሚያብራሩ አስተርጓሚዎች ተመድበዋል:: አቶ ዘለዓለም ደበበ የኮሚቴው የሚድያ እና ሕዝብ ግንኙነት አስተባባሪ አጠቃላይ ለነገው ዝግጅት በጀርመን ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን እንግዶቻቸውን በክብር ለመቀበል ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ መሆናቸውን ነው የነገሩን ::
በመላው አዉሮጳ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በአገሪቱ ለተጀመረው ሁለንትናዊ ለለውጡ ያላቸውን አጋርነት በነቂስ ወተው እንዲያሳዩ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ እና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብይ አህመድ አቀባበል ዓብይ ኮሚቴ ሰብሳቢ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ጥሪ አቅርበዋል::
በአዉሮጳ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ታሪክ የመጀመሪያ ይሆናል በተባለው እና የልዩነት እንዲሁም የጥላቻው ግንብ ፈርሶ በፍቅር እና በአንድነት የለውጥ ስሜት በዲያስፖራ የሚኖሩ ወገኖች በሚሰባሰበቡት ታላቅ ሕዝባዊ ጉባኤ ከ25ሺ በላይ ከመላው አዉሮጳ የተውጣጡ ኢትየጵያውያን ከጠቅላይ ሚንስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ ጋር በመወያየት በሀገራቸው የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ እና ሁለንተናዊ ልማት ላይ በሚሳተፉበት መንገድ ላይ እንደሚመክሩ ታውቋል።
Hawaasa keessatti dhibeen kintaarotii kallattii dogongora ta’een hubatamee jiraachuu isaa hubadheen jira.namootni dhibee kanaan yoo qabaman akka abaarsa yookin dheekkamsa waaqayyootti ilaalu.tokko tokko inumaa maqaa dhibee kanaa dhahuu kan sodaatanis ni jiru. namootni kuun immoo akka dhibee kaansariitti ilaalu.garuu dhugummaan isaa maalii? mee haa ilaallu.
=>dhibeen kintaarotii (haemorroids) maali? dhibeen kun dhibee naannoo qaama gadi taa’umsa( hudduu)(anus) kanaa irratti yookin keessan gadi bahu yoo ta’u innis kan dhufu ujummoolen dhiiga deebisan( dilatation of venous vessels of anal region ) yoo dirri isaanii diriirudhaan ujummoolen kun dhiigan guuttamaniidha.. kanaaf dhibeen kun kan uumame ujummooleen dhiiga deebisan(veins) dhiigan guttamanii dhiigni isaan keessaa achitti yoo walitti qabamuudha.
=>namni dhibee kana qabu malattoolee akkamii irratti mullata? dhibeen kun dhibee namoota umuriin isaanii 45-65 jidduu jiru irratti kan baay’atu dha. namni dhibee kana qabu wantoota armaan gadii of irratti arga.
-gadi teesuma (stool)(bobbaa) isaa irratti ykn waraqata ittin qulqulleefatu irratti dhiiga diimaa arguu. kuni mallattoo isa jalqabaati
-akka tureen immoo yeroo mana fincaanitti fayyadamu qaama gadtessuma isaa keessan wanti gadi bahu isatti dhagahama.(pile)
– qaamni gadi taa’umsaa baay’ee isa hoosisuu jalqaba(itching or pruritus)
-akka tureen immoo qaamni gadi bahu kun erga bobbaa isaa fixateen booda ofiin ol deebi’uu dhisee gaduma bahee hafuu jalqaba .amma dhiigni dhukkubbii qabu bahuu jalqaba.yeroo mana fincaanii fayyadamu baay’ee isa dhukkubuu jalqaba.
=>kintaarotiin gosa meeqatu jira? gosa lamatu jiru.inni tokko kintaarotii keessaa inni biroo immoo kintaarotii alaa jedhamuun beekkamu.kintaarotiin keessaa(internal haemorroid) kan jennu gara keessa qaama gad teessuma keenyatti kan uumamuudha. kintaarotiin alaa(external hemorroid) kan jennu immoo gara ala ykn gara qaama gadi teessuma gara gadi aanutti kan uumamuudha.
=>wantootni dhibee kintaarotiif nama saaxilan maali fa’a? dhibee kanaaf wantootni nama saaxilan baay’ee yoo ta’an muraasa isaanii mee haa ilaallu.
-goga garaa (constipation) isa yeroo dheeraa.
-furdina(obesity) keessattuu namoota garaa cooman.
-namoota dhibee tiruu qaban(liver disease and portal hypertension)
-alkoolii baayinaan dhuguu.
-dhibee nama qofaasisu isa yeroo dheeraa( chronic cough)
-dhibee sukkaraa(diabetic mellitus) qabaachuu
-umuriidhan dullummaa fi fkk fa’a
=>dhibeen kun yaala qabaa? eeyyee. namni mallattoowwan armaan oliiti ibsame qabu yaallamuu ni danda’a. yaalli dursa qorichaa fi haala jireenyaa fooyyesuu yoo kanaan hin taane immoo opirashiniidhan dhibee sirraa’udha.nyaata muduraa fi kuduraa baayinaan akka nyaatu gorfama(waan goga garaa dhoowwaniif), bishaan hoo’adhaan qaama gadi teessuma isaa akka dhiqatu,waraqata akka hin fayyadamne,fi qorichotni akka bobbaa isaa laafisefii salphaatti bahuuf godhanii fi hoosisa akka dhiisu goadhan ni keennamaaf.yoo qaamni gadi bahee ofii isaatii ol hin deebine ta’e. fi dhiigni baay’ee ta’e opirashinin akka yaallamu ta’a.
=>kanaaf walumaa galatti dhibeen kintaarotii kaansarii miti, namarraa namatti hin darbu,namni kamiyyuu dhibamuu danda’a,abaarsa waaqayyoo miti, yaallamanii fayyuun ni danda’ama,keessattuu fuduraa fi muduraa( high fiber diet) nyaachun of irraa ittisuun ni danda’ama.dhiirris durbis dhibamuu ni danda’u.
–dhibeewwan mallattoo akanaa qaban kan biroos waan jiraniif qoratamanii gargar baafachuun gaaridha.
Dhaabbata bilisummaa falasxiin
Dhaabbanni Bilisummaa Falasxiin Beekamtii Israa’eliif kennee ture kan haqe tahuu beeksise
Koreen Jiddu galeessaa Dhaabbata Bilisummaa Falasxiin (PLO) kora guyyaa lamaaf Ramallaah keessatti geggeessaa ture xumuruun ibsa baaseen, dangaa bara 1967 irratti hundaayuun hanga Israa’eel Biyya Falasxiin magaala guddoo isii Al-Quds/Jerusalem waliin beekamtii guutuu kennitutti, beekamtii Israa’eliif kennee ture kan uggure tahuu beeksise.
Koreen Jiddu galeessaa PLO akka jedhetti, bulchiinsi Falasxiin dhimma nageenyaa irratti waliigalteen Israa’eel waliin godhamee ture kan haqame yoo tahu, waliigalteen dhimmoota diinagdeetis yeroodhaaf kan uggurame tahuu beeksise. Dabalataanis Waligaalteen Oslo Accord jedhamuun beekamu kana booda bu’aa kan hin qabne tahuu labse.
Dhaabbatichi murtii kana kan fudhateef Walii galteewwan kunniin gama Israa’eliin kabajamaa waan hin jirreef tahuu ibse. Murtiin dhaabbatichaa kun hujii irra kan oolu Prezdaant Mahmuud Abbaas fi koree hujii raawwachiiftuu PLO’tiin yoo fudhatama argate qofa tahuu gabaasni arganne ni ibsa.
Yoo haatimanaakee garaatti baattu akkamitti kunuunsita
Sticky 2018-10-28 Mohammed Nasir	Leave a comment
1. Akkuma ulfaa’uu ishii barteen akka gammachuun guddaan sitti dhaga’ame itti himi. Tarii karoora kee malee dhufe ta’a; garuu
karoora rabbii malee hin dhufne. Accept it!
2. Danda’aa ta’i. Haati manaakee yoo ulfooftu amalli ishii ni
jijjiirama. Gaafii ni gammaddi; gaafii immoo sababuma malee lafaa
katee boossi. Kana kan fidu hoormoonii qaama ishii keessaa
jijjiiramu malee rakkoo ishii miti.
3. Akka ofii kee garaatti baatteetti jiraadhu. Kana jechuun fkn yoo
dooktarri ishii buna hin dhugiin jedheera ta’e atis waliin dhiisi. Bira
teessee dhugdee akka itti dhaga’amu hin godhiin. Alkoolii, fi kkf
4. Gara mana yaalaa yoo ishiin deemtu yeroo hunda waliin deemi.
Uumaa rabbii ta’ee ishiin garaatti baatte malee mucaan gaafa
dhalatu qixxeedha. Waan salphaa miti kun hedduu sitti gammaddi.
5. Akkuma dur yeroo hin ulfaa’iinii sana akka ishiin bareeddu itti
himi. Yoo ulfooftu haati manaakee qaamaan kan duraa irraa
baay’ee jijjiiramti. Kanaaf jecha akka iji kee ammallee ishii irra jiru,
akka sitti bareeddu beekuu barbaaddi. Sin gaafattu, utuma ishiin
sin gaafatiin itti himi.
6. Yoo dhukkubaatti cinaa dhaabadhu. Dubartoonni ulfaa 75% kan
ta’an morning sickness ni dhukkubsatu. Nyaanni yoo nyaatan garaa
hin taa’u oldeebi’a. Atimmoo zinjibila danfisii kenniif.
Hiriira har’a kaaba biyyaatti tahaa oole
Hiriirri har’a kaaba biyyattii keessatti godhamee oole yoo cuunfamee laalamu farra haaromsa kanaati. Tigraay irraa haa eegallu. Lakkoofsi hiriirtotaa xiqqoo tahuyyuu kaayyoon isaa hoggansa amma jiru irraa rakkoo qabaachuu dha. Barattoonni keenya Tigraay irraa ala deemnaan ni ajjeefamu kanaafuu alatti hin erginu jechuun gahummaa fi of kenniinsa hoggansa Dr. Abiy irratti gaaffii uumuu dha. Cuunfaan miira jaraa mootummaan federaalaa kun kan dhaabate dhiiga ilmaan Tigraayiin waan taheef, hanga gaheen ilmaan Tigraay bakka olaanaa duraa sanitti hin deebinetti mootummaan kun nagaan jiraachuu hin qabuu dha. Kana ammoo ifatti dhaadannoo isaanii irratti afaan jaraa fi Ingliffaan katabatanii mul’ataniiru.
Hiriirri magaalota naannoo Amaaraa keessatti geggeeffamee ooles akkasuma farra hoggansa haaromsaa kana ture. Dheebuu lafa saammachuu fi dheebuu aangoo siyaasaa biyyattii harkatti galfachuu guddaatu keessatti mul’ate. Hiriirri kun kan sabboonummaan Amaaraa daangaa dabree itti mul’ate dha. Hoggansi Dr. Abiyyi Amaaraaf bakka addaa yoo hin kennine, gaaffii jaraa hundaaf yoo deebii quufsaa hin kennine humnaan sosso’anii galii isaanii dhaqqabuuf qophaahuu akeekkachiisan. Hiriira kana keessatti wanti ifatti mul’ate kan biraa noonnoo Tigraay waliin wal ciniinsa hamaa keessa seenuu jaraa ti. Lafa Walqaayitii fi Raayyaa yoo seeraan nuu kennamuu baate humnaan cabsinee deeffanna dhaadannoon jedhu bal’inaan dhagahameera.
Gama biraan MM Dr. Abiyyi daaw’annaan naannoo Amaaraatti har’a godhaniin maqaa dhahuu baatanis gaaffii hiriiricha keessatti ka’aa jiruuf deebii kennaniiru. Dheebuu hiriirtotaa sana dubbii imbocii isa Xaanaa weeraree dhuunfataa jiruun wal fakkeessanii ibsan. ”Ana qofa jechuun waliin kufuutti nu geessa, kanaafuu akka imbooc kana tahuun nun baasu” deebiin jedhu kallattiidhaan hiriirtota dhaadachaa oolan sanaaf akka tahe ifatti beekama.
Cuunfaa sochiilee gama kaabaa kana irraa wanni hubannu, hawaasa lamaanuu (Amhara & Tigray) keessaa warri baranne jedhu hoggansa haaromsaa kana gufachiisuuf karaa mata mataa isaanii fiigaa jiraachuu dha. Sababni isaa ammoo hoggansi muummeen waan saba isaaniirraa tahuu dhabeefi. Dandeettii Dr. Abiyitti ni amanu tahuyyuu, waan inni Oromoo taheef qofa mootummaa isaa irratti rakkoo uumuuf gamaa gamanaa baroodaa jiru. Hiriira waamanii didichuu fi qawwee furmaata godhachuun hoggansa kana gufachiisuuf hojjechuu dha. Namni an Oromoo dha jedhu aggaammii gama kaabaan mul’ataa jiru kana laalee hoggansa kana tumsee waliin hin dhaabatu taanaan lafeen gootota Oromoo ofii kufanii guyyaa kana fidanii isa waraana.
አደጋ በደረሰበት የነዳጅ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ውስጥ በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ በርካታ የጦር መሳሪያ ተገኘ በአማራ ክልል በገንዳ ውሀ ከተማ አስተዳደር አደጋ ደርሶበት በተገለበጠ የነዳጅ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ውስጥ
በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ በርካታ የጦር መሳሪያ ተገኘ።
ተሽከርካሪው ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ሲጓዝ የነበረ ሲሆን፥ በገንዳውሀ ከተማ አስተዳደር በተለምዶ ኢንዱስትሪ መንደር በሚባል አካባቢ በትናትናው ዕለት ፍየል አድናለሁ በሚል ምክኒያት በመገልበጡ አደጋ ደርሷል።
በዛሬው ዕለትም የከተማ አስተዳደሩና የወረዳው የጸጥታ ሀይሎች ባደረጉት ፍተሻ መሰረት 97 ክላሽን ኮፍ፣ 1 ሺህ 291 የቱርክ ሽጉጥ እና 3 ብሬን መገኘቱን የመተማ ወረዳ ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታውቋል።
Hiriirri tibba kana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru injifannoo dhufeef gufuu ta’uu malee kan nu ceesisu akka hin taane hayyoonni Oromoo himan.
Dr. Indaaluu Fufaa, Gargaaraa Piroofeesaraa Buzaayyoo Daggafaa fi Dr. Tasfayee Shifarraaw akka jedhanitti rakkoolee xixiqqoo gattaa’anii maritanii hiikachuun danda’amuuf daandiitti bahuun barbaachisaa miti jedhaniiru.
Oromoon yeroo amma biyya gaggeessaa jira. Hiriirichi sadarkaa qabsoo uummanni Oromoo irra gahe kan madaalu miti jedhaniiru.
Yeroon kun yeroo yaada mo’ataadhaan taa’anii wal falmanii biyyaa fi Afriikaa hoogganuuf qophaa’an malee yeroo itti wal burjaajjessan ta’uu akka hin qabnes dhaamaniiru.
Naannoo Benishangul Gumuzitti leenjii loltummaa
Benshangul Gumuziitti namoonni seeraan alaa bosoona keessatti leenjii loltummaa kennaa turan 10 to’annaa poolisii jala olfamuun himame. Kana duras ummata naannichaa irratti miidhaa qaqabsiisuuf Aanaa Asoosaa bosoona ganda Gabgan keessatti shakkamtoonni 51 osoo leenjii loltummaa fudhataa jiranu to’annaa jala olfamanii turan. Ammas leenjiistoonni namoota aanaalee adda addaa irraa filuun leenjisaa turan kunneen, eeruu ummataatiin to’annaa jala olfamuufi poolisiniis qorannoosaa atattamaa xumuree seeratti kan dhiyeessu ta’u ittaanaa Komishiinara poolisii naannichaa Komaandar Naggaa Jaarraa eeruun midiyaaleen biyya keessaa gabaasan.
Adurree ykn Bashoo
Adurreen mana keesa yeroo jiraattu dhukkuba toksoplasmoosis jedhamu kan pirotozuwa toksoplasma gondi jedhamuun dhufu gara namaatti dabarsiti. dhukkubichi kan daddarbu udaan (bobbaa) adurree tuttuquun yoo tahu, dubartiin ulfa qabdu hunda caalaa dhukkubicharraa of eeguu qabdi, sababni isaas dhukkubichi karaa hidda handhuraatiin gara ulfa garaa jiruutti waan darbuufi. daa’imni haala kanaan dhukkubichaaf saaxilame rakkoon fayyaa adda addaatu isa mudatuu dandaha. fkn:
-mataan garmalee guddachuu (hydrocephalus)
-rakkoo sammuu (mental problem) fa’aaf ni saaxilama.
AKKAMIIN OFIRRAA ITTISNA?
1.Adurreen mana keesa kan jirattu yoo tahe qulqullina isii sirritti eeguu
2.bakka bultii adurree guyyaa guyyaan qulqulleesuu
3.dubartiin ulfaa adurree tuttuquus ta’ee mana isii qulqulleesuu irraa of qusachuu qabdi
4.erga bobbaa adurree qulqullesinee booda harka keenya sirriitti samunaan dhiqachuu.
Godina Wallaga lixaa keessatti walitti bu’iinsa hidhattoota adda bilisummaa oromoo fi makkalaakaya
Sticky 2018-10-05 Mohammed Nasir	Leave a comment
​​Walitti Bu’iinsa Loltoota WBO fi Waraana Mootummaa jiddutti uumameen lubbuun nama 8 galaafatame
Godina Wallaggaa Lixaa keessatti Makkalaakayaa fi hidhattoota Adda Bilisummaa Oromoo jiddutti walitti bu’iinsa uumameen, lubbuun namoota hedduu kan bade tahuu maddeen gabaasan. Guyyaa kaleessaa Aanaa Beegii ganda Gabaa Khamiisa fi ganda Laaloo jedhamutti lolli cimaan akka ture odeeyfannoon naannicha irra arganne ni mul’isa. Waraanni mootummaa Ooraalii 20 ol tahu guyyoota dabran keessa gara magaalaa Beegii kan seene tahuunis beekameera. Namni naannichaa irraa dubbifne akka nuuf himetti, guyyaa kaleessaa aanicha keessatti dubartii takka dabalatee namoonni 8 ajjeefamanii jiru.
Jiraataan naannichaa kun akka jedhutti, sababni walitti bu’iinsa kanaa mootummaan loltoota WBO hidhannoo hiikkachuusaadhaaf yaalii godhaa jiru hordofuun waldhabdee uumameen akka tahe nuuf ibse. Waraanni Makkalaakayaa kaampiilee WBO aanichaa keessa jiran irratti haleellaa cimaa kan raawwataa jiru akka tahee, loltoonni ABOtis waraana makkalaakayaa irratti miidhaa cimaa kan dhaqqabsiisan tahuun gabaafamee jira. Walitti bu’iinsa kana hordofuun Godina wallaggaa Lixaa aanaalee heddu keessatti yeroo amma daandiileen kan cufaman tahuunis beekamee jira.
Odeeyfannoo kana mirkaneeffatuuf qondaaltota aanichaa keessaa nama tokko bilbilaan kan dubbisne yoo tahu, namni eenyuuman isaa akka ibsamu hin barbaadne kun, rakkoon nageenyaa cimaan aanicha keessa jiraatuu fi walitti bu’iinsa uumameen lubbuun namaa dabruu nuuf mirkaneesse. Dabalataanis hanga ammatti rakkoo loltoota mootummaa fi WBO jidduu jiru furuuf gama bulchiinsa Godinaa fi naannoo irraa tarkaanfiin kan hin fudhatamin tahuu nuuf mirkaneesse.
በቻይና በሌሊት ወፍ ላይ ከኢቦላ ጋር የሚመሳሰል ቫይረስ መገኘቱ ተገለፀ
2019-01-11 Mohammed Nasir	Leave a comment
በቻይና ከኢቦላ ጋር
ተመሳሳይነት ያለው ቫይረስ በሌሊት ወፍ ላይ መገኘቱ ጥናት
“መንገላ” የሚል ስያሜ የተሰጠው ቫይረሱ አደገኛ ነው የተባለ ሲሆን፥
በቻይና ዩዋን ግዛት የሌሊት ወፍ ላይ መገኘቱ ነው በጥናቱ
ቫይረሱም በሰዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ትኩሳት እና ህመም ሊያስከትል
የሚችል መሆኑን ነው ኔቸር ሚክሮባዮሎጂ መጽሄት ላይ የታተመው
የሌሊት ወፎቹን የበራሄ ልዩነት እና ያሉበትን መልክአ ምደር ማጥናት
ቫይረሱ ወረርሽኝ እንዳይሆን እና የሚያደርሰውን ጉዳት ቀድሞ
ለመከላከል እንደሚያስችልም ነው ተመራማሩዎች ያስታወቁት።
“መንገላ” የሚል ስያሜ የተሰጠው ቫይረስ ሳይሰራጭ በፊት በጥናት
መለየቱ በቻይና ከተሰሩ ጥናቶች ጠንካራው እንደሚያደርገውም ነው
ተመራማሪዎቹ በቀጣይ በሚያከናውኑት ጥናት “መንገላ” ቫይረስ ወደ
ሌሎች ዝርያዎች መተላለፍ ይችላል?፤ የሚተላለፍ ከሆነስ በምን
መልኩ፤ የሚለውን ለመለየት እንደሚሰሩ ገልፀዋል።
Mootummaan Sudaan Naannolee Biyyatti Heddu Keessatti Labsii Yeroo Muddamaa Labse
2018-12-22 Mohammed Nasir	Leave a comment
Suudaan keessatti kufaatii maallaqaa fi qaala’iinsa
jireenyaa hammaataa dhufe hordofuun, lammiileen biyyattii
guyyoota afran dabraniif mormii geggeessaa kan jiran yoo
tahu, mootummaan Suudaan mormii guutuu biyyattii
keessatti babal’ataa dhufe kana too’achuudhaaf labsii
yeroo muddamaa labsuu ibse. Haaluma kanaan magaalaa
Khartuum dabalatee hanga ammaatti naannoolee afur
keessatti labsiin yeroo muddamaa hujii irra kan oole tahuu
gabaasni arganne ni mul’isa.
Ministeerri barnootaa ol’aanoo fi Qorannoo Saayinsii Sadiq
Al-Hadi ibsa kenneen, mormii biyyattii keessatti babal’ataa
dhufe waliin walqabatee yuunivaristiiwwan bulchiinsa
naannoo Kartuum keessa jiran hundi cufamuu beeksise.
Haaluma wal fakkaatuun, kutaalee White Nile, Gadariif fi
Naannoo Kaabaa keessatti manneen barnootaa hundi kan
cufaman tahuu gabaasni Anaadooluu Niiwus irraa argame
Mootummaan mormii ummataa kana too’achuudhaaf
tarkaanfii cimaa kan fudhatu tahuu kan akeekkachiise
tahus, guyyaa hardhaatis kutaalee biyyattii heddu keessatti
ummanni daandiiwwanitti bahuun dallansuu cimaan mormii
kan itti fufe tahuun beekkameera. Mormii cimaa biyyattii
keessatti dhoohe kana hordofuun, mormitoonni Khartuum
dabalatee magaalota heddu…
Dubartii qaroo dhabeeyyii taatee teeknoolojii qaro-dhabeeyyii gargaaru uumaa jirtu
2018-12-07 Mohammed Nasir	Leave a comment
Chiyeko Asakawa balaa lafa bishaan daakaatti isheerra
gaheen umurii 14’tti qaroo ijashee dhabde. Waggootii
darban soddomaaf teeknoolojii jireenya namoota qaro-
dhabeeyyii fooyyeessu hojjechaa turte.
“Yeroon jalqabe teknoolojiin gargaarsa kennuu hin jiru ture,”
jettii lammiin Jaappaan Dr Asakawa.
“Of danda’e odeeffannoo dubbisuufi ofiikoon lafan
barbaadee deemuu hin danda’un ture.”
Wantootni isheen keessa dabarte kun baruumsa ‘computer
science’ namoota qaro-dhabeeyyiif kennamu akka barratuuf
Sana booda kaampaanii koompiitara omishu IBM jedhumu
keessatti hojii eegaltee, sadarkaa barumsaa doktireetii
ishees achumatti argatte.
Miidhaa narra gaheen ijakoo dhabus biyya koo hin
‘Garee san keessatti fudhatamuu ni feena’
Addunyaa keessatti teeknoolojii marsaritii sagaleen
fayyadamuu dandeessisuu isa jalqabaa namoota uuman
keessaa isheen tokkodha.
Ogeessota teeknoolojii biroo waliin ta’uun namoota qaro-
dhabeeyyii gargaaruuf hubannoo teeknolojii qabdutti
fayyadamuun meeshaalee adda addaa uumuu barbaadu.
Dr Asakawa teeknolojii ‘NavCog’ jedhuumu uumteetti.
Teeknoolojiin kun bilbila irraa sagaleen kan to’atamu yeroo
ta’u namootni qaro-dhabeeyyiin mana keessaa bilisaan
akka socho’an gargaara.
“Sirriitii yoo nu gaggeessuu baateyyuu, hedduu nu
gargaara,” jetti gartuu Badhaasa Noobel shan kan mo’atte
Ameerikaa keessatti wiirtulee hedduufi Tookiyootti immoo
iddoo tokkottii ‘NavCog’ sadarkaa yaalii irra jira.
Uummattatti dhiyeessuufis qophiin xumuramaa akka jiru
Amma maal kalaqxe?
Hojiin ulfaataa Dr Asakawa inni itti anuu kalaqa amma
irratti hojjataa jirtu ‘korojoo AI’ jedhamudha.
Teeknolojiin kun nama qaro-dhabeessa tokkoo fakkenyaaf
buufata xiyyaaraa keessaatti gaggeessuufi odeeffannoo
yeroo balaliinsa akkasumas geeddarumsa jiraachuu
danda’u irratti odeeffannoo kan keennuu danda’udha.
Korojoon kun mootora mataasaa waan qabuuf ofiin
socho’uu danda’a, kaameeraa nannoo isaa ittiin to’atu
qaba, akkasumas teknoolojii fageenyaa safaruu danda’u
‘Lidar’ jedhamu of keessaa qaba.
Yemmuu gulantaa gamoo ittiin yaaban bira ga’amu, lafa ol
kaasame akka baatamu korojoon kun nama fayyadamaa
jirutti ni beeksisa.
Dubbii himtuu waajjira ministira muummee akkamiin waamu?
Dubbii himtuu Waajjira Ministira Muummee Billeenee
Siyyuum ammaan achi maqaa isaanii qofaan waamaa
jedhe waajjirri isaanii.
Ergaa miidiyalee hundaaf Kamisa ergameen dubbi himtuu
waajjirichaa jecha Afaan Amaaraa ‘Weyzaro’ ykn Weyzarit’
jedhu dura aansanii waamuun dogongora jedheera.
Kanas, miidiyaalee hawaasummaa irratti namoonni dubbii
Xalayaan waajjirri Ministira Muummee miidiyaaleef erge
maaliif Billanee Siyyuum ‘Weyzaro’ ykn ‘Weyzarit’
jedhamanii waamamuu akka hin feene hin himne.
Namoonni marsaalee hawaasaa irratti yaada kennan
hedduun garuu bultii horachuufi horachuu dhiisuu walin wal
Jechi Afaan Amaaraa ‘Weyzaro’ jedhu dubartii bultii horatte
waamuuf kan oolu yoo ta’u jechi ‘Weyzarit’ jedhu ammoo
dubartii bultii hin horatiin waamuuf oola.
Afaan Oromoon hoo?
Jechi Afaan Oromoo yeroo mara dubartoota waamuuf oolu
‘Aadde’ jedhu hiika kanarraa adda ta’e qaba jedhu
Yunivarsitii Finfinnetti barsiisaa Afaan Oromoofi Og-Barruu
kan ta’an Obbo Qulqulluu Ijoo.
Afaan Oromoo keessatti Aadde jechuunis ta’e Obbo
jechuun itti gaafatamummaafi sadarkaa manguddummaa
irra namoota jiran agarsiisuuf oola jedhu.
“Aadde jechuun durba ta’uu ykn heerumuufi heerumuu
dhiisuu waliin waan wal qabatu miti, Obbo jechuunis
Akka hayyuun Afaanii kuni jedhanitti hiiki Afaan Amaaraa
‘Weyzaro’ ykn ‘Weyzarit’ jedhu Afaan Ingilizii keessa kan jiru
‘Mrs ykn Miss’ jedhuun wal fakkeenya qaba.
Qubeellaan waadaa attamiin namummaa dubartootaa xiqqeessa?
2018-12-06 Mohammed Nasir	Leave a comment
Oggeettin tarsiimoo miidiyaa Matilde Suwesun, aadaan
qubeellaa waadaa kennuu shamarraan kan midhuu akka
Shaakallii kun dhaabachuu qaba jechuun maaliif
geddaramsi jiraachu akka qabu sagantaa ‘BBC 100
Women’ jedhamuuf barreesiteetti.
Kana dura hoggaa lama heruumeera, kana boodas
heerumu nan danda’a garuu qubeellaa waadaa barbaadees,
qabaadhees hin beeku.
Qubeellaan waadaa yaadaa wal qixxummaa dubartootaa
kan mormudha jedheen amana. Yaadaa dubartii of
dandeessu ta’uu qabdi jedhu mormuun dubartiin qubeellaa
kana qabdu kan namaa ta’uu ishee ibsa.
Dabalataanis qubeellaa waadaa gati jabeessa
kaawwachuun dubartii tokkoof kabaja ykn ulfina kenna
Faayidaa buna dhuguun fayyaa keenyaaf qabu
2018-12-06 Mohammed Nasir	1 Comment
Dhalli nama buna
dhuguu kan eegale jaarraa 15 ffaa dha as akka ta’e
ragaan mul’isa. Yeroo ammaa kana akka addunyati
bunni dhugaatiiwwan hedduminaan dhugaman keessa
tokko ta’uu ni beekkama.
Faayidawwan buna kun mee maal fa’a?
1.Dhukkuba sukkaara ittisuuf. Qorannoon heddu kan
mul’isu bunni dursee dhukkuba sukkaara (type-2
diabetes mellitus) nurra ittisuu akka danda’uudha.
Dhukkuba sukkaara yeroo amma akka addunyaati nama
miiliyoonni 300 oltu ittin rakkata. Namni buna dhugu
carraa dhukkuba kanaan qabamuu parsantii 23-50tiin
2. Carraa dhukkuba onnee fi dhiiguu sammuu keessatti
hir’isa. kara tokkoon dhukkubni onnee fi dhiiguun
sammuu keessattii(stroke) walqabataa waan
ta’eef;dhukkuba sukkaara yoo ittisu dhukkuba onnee fi
dhiiguu sammuu keessattis ittisa. karaa biratiin ammoo
waldhahuu rukkutaa onnee(heart rythm disturbance) kan
dhukkuba onneetii fi dhiiguu sammuu keessatiif sababa
ta’uu maluu nurra dhorka.
3.Dhukkuba narvii nurra ittisuuf. Buna dhuguun dulluma
keessa dhukkuboota narvii dhufu malan ittisa kunis :
Madaala qaama eegachuu dadhabuu,maasha
alee qaamaa garmalee kotoonfachuu,qaamaan
hoolachuu fi deemsaan qususu..kun waliigalatti”
parkinson’s disease” jedhama.
Dandeettii waa yaadachuu dhabuu ykn waa hunda
irranfachuu..”Dementia/Alzheimer’s disease “jedhama.
Dhukkubootni lameen kun keessumatuu namoota umriin
isaanii 65 ol ta’e irratti mul’atu. Dhukkuboota yaaluuf
rakkisaa ta’aniidha. Namooni buna dhugan carraan
dhukkuboota kanaan qabamuu ofirra ittisu.
4.Kaansarii ittisuuf. Qorannoon kan agarsiisu namootni
buna dhugan carraan kaansarii tiruutiin qabamuu
parsantii 40 gadi yoo busu,carraa kaansarii mari’imaanii
parsantii 15 niin gad buusa.
Bunaa fi nagaa hin dhabinaa!!
Pirezidaantiin MNO obbo Lammaa Magarsaa ummata keenya dhiifama gaafanna jedhan
Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo
Lammaa Magarsaa rakkoon naannoo Benishaangul
Gumuziifi Lixa Oromiyaatti uummame uummanni hedduun
miidhamuusaaf dhiifama gaafanna jechuun marii dhaabbilee
siyaasaa Oromoo har’a gaggeeffame irratti dubbatan.
Rakkoon naannoo Benishaangul Gumuziifi Lixa Oromiyaatti
uummame uummata keenya baay’ee miidheera kan jedhan
pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa
miidhaan uummata irra ga’e isaan gaddisiisuu himan.
ODP, ABO fi KFO’n haala nageenyaa tibbannaa naannoo
Oromiyaa ilaalchisun marii jaarmiyaalee siyaasaa har’a
taasifameen cinaatti ibsa waliinii kennaniiru.
Hiriira Oromiyaa: Mormii mootummaa moo gaaffii
‘Akka biyyaatti itti fufuufis diigamuufis yeroon
cee’umsaa kun murteessaadha’
Itti gaafatamaan Poolisii Godinaa rasaasaan rukutama
Pireezidaant Lammaa, komiin uummanni mootummaan
yeroodhaan nuuf hin qaqqabne jedhee dhiyeesse komii
sirrii ta’uu isaatin uummata keenya dhiifama gaafanna,
hiriirri bahames hiriira sirriidha jennee amanna jechuunis
Yeroo qaqqabuufii qabnutti qaqqabuu dhiisuu keenyaan
uummatni miidhaa cimaaf saaxilameera kan jedhan Obbo
Lammaa Magarsaa “rakkinichi bal’aa ta’uusaa yeroo
hubanetti gama gargaarsaatinis ta’e gama nageenyaan
uummata cinaa dhaabbachuuf yaalii guddaa taasisaa jirra”
Rakkoon kun dhimma naannoolee lamaa ta’uu isaatin
mootummaa federaalaa walin ta’uun qaamolee uummatni
akka ajjeefamu fi buqqa’u taasisan akkasumas kan
qabeenya saaman seeratti akka dhiyaatan fi olaantummaan
seeraa akka mirkanaa’uf hojjechaa akka jiran
“Gara fulduraattis uummata keenya walin mari’annee
wantootni ifa goonu baay’een ni jiru” jedhan.
Dura taa’aan kongirasii federaalawaa Oromoo Dr Mararaa
Guddinaa rakkoolee nageenyaa mul’atan furuuf uummatni
Oromoo tokkummaan walin dhaabbachuu akka qabu
Kana malees dhaabbileen siyaasaa Oromoo qabsoo
uummata Oromoo afaanin qofa osoo hin taanee hojiidhaan
agarsiisuu danda’u qabu jedhan.
Hayyu dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitin
mootummaan gaafiwwan hiriira tibbanaa irratti ka’aa
turanif beekkamtii kennuunsaa sirrii dharakkoon nageenyaa
karaa Baha, Lixa, Kibba fi kibba bahaan mul’atu dhiibbaa
maqaa daangaatin uummata Oromoo irratti taasifamaa jiru
Gochaa kanas dhaaboleen Oromoo walin ta’uun ni
maseensina jechuun dubbatan.
Gama biraatin garuu rakkoon dhaabolee siyaasaa Oromoo
gidduutti mul’atu dhimma dhaaboliin walin mari’achuun
irratti walin hojjetanidha jedhan.
Haati gadaamessi arjoomameef daa’ima fayya qabeessa deesse
Bara Faranjootaa 2016 Saa’oo Pooloo Braaziilitti yaala
baqassanii wallaanuuu sa’aa 10 fudhatee fi sanaana
boodas deeggarsa yaalaa daa’ima horachuu
taasifameefin amma haadha daa’imaa taatetti.
Gadaamessa dubartoota 39f dubartoota biroorraa
dabarfameen daa’imman 11 akka dhalatan ragaaleen
yaalaa ni agarsiisu.
Gadaamessi dubartoonni lubbuun isaanii ega darbeen
booda dubartoota birootif dabarfame 10 hin milkoofne.
Gadaamessi amma daa’imaan milkaa’e garuu, kan
dubartii umriin ishee 40n keessa jirtu, kan sadi deessee
fi rakkoo dhiiguu sammuu keessatiin kan lubbuun ishee
Dubartiin gadaamessi arjoomameefii haadha daa’imaa
taate fi amma umriin ishee waggaa 32 ta’e, rakkoo
“Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome” qabdi.
Dhibeen kunis dubartoota 4,500 keessaa takkarratti kan
mudatu yammuu ta’u, qaama saalaa dubartootaatii
kaasee amma gadaamessaatti kan miidhudha.
Gadaamessi arjoomamee fi qaamni walhormaataa
ulficha akka hin miine dooktaroonni hordoffii gaarii
Deeggarsa yaalaa taasifameen booda killeen daa’ima
ta’uu danda’uu fi duraan baafamee olkaa’ame baatii 7
booda deebi’ee gadaamessatti akka galu taasifame.
Saa’oo Poolootti Hoospitaala daas Kliiniikaas keessa
kan hojjetan Dooktar Daanii Ejzeenbarg akka jedhanitti,
gadaamessi dubartoota lubbuun jiranirraa arjooman
argamu carraa dubartoonni rakkoo gadaamessaa qaban
daa’ima horachuu ni dabala jedhaniiru.
ቢሊዮን ብር የውጪ ኮንትራት
መፈረሙ ታወቀ (የሰነድ
የሜቴክ ኃላፊዎች ከፍተኛ ዘረፋና ሌብነት የፈፀሙት
ግን ከሀገር ውስጥ ይልቅ ከውጪ ሀገራት ድርጅቶች
ጋር በሚፈፅሙት የግዢ ስምምነት አማካኝነት ነው።
ሆኖም ግን ሰሞኑን በእነ ሜ/ጄ ክንፈ ዳኘው ላይ
የቀረበው የክስ ማስረጃ ስመለከት የወንጀል
ምርመራው በዋናነት በሀገር ውስጥ ግዢዎች ላይ
ትኩረት ያደረገ ነው። ከዚህ አንፃር ከሜቴክ ጋር በተያያዘ
የሚካሄደው ምርመራ በሚፈለገው ደረጃ እየሄደ
አይደለም የሚል ስጋት በውስጤ ተፈጥሮ ነበር። ዛሬ
ጠዋት ልክ ከእንቅልፌ ስነቃ በፌስቡክ የመልዕክት
አድራሻ የደረሰኝ መረጃ ግን በጉዳዩ ላይ የነበረኝ ስጋት
ወደ ግራ መጋባት ስሜት ቀይሮታል።
በእርግጥ መረጃው የተላከው ከወራት በፊት ነው።
በፌስቡክ በየዕለቱ ብዛት ያላቸው መልዕክቶች
ስለሚደርሱኝ የተወሰኑትን ሳላያቸው ያልፋሉ። ዛሬ
ጠዋት ታዲያ ውስጥ አዋቂው “ምነው ባለፈው አመት
ሐምሌ ወር ላይ የሜቴክን ጉድ የሚያሳይ ሰነድ ልኬልህ
ዝም አልክ?” የሚል ማስታወሻ ሲልክልኝ ወደኋላ
ተመልሼ መልዕክቶቹን መፈተሸ ጀመርኩ። ለካስ
ከወራት በፊት የሜቴክን የአምስት አመት ስትራቴጂክ
ዕቅድ እና የሜቴክን የግዢ ስምምነት የመረጃ ቋት
(Data base for Contract Agreement )
ከሜቴክ ሰራተኞች ሾልኮ የወጣው የግዢ ስምምነት
የመረጃ ቋት እ.አ.አ. ከ2010 – 2012 ዓ.ም ባሉት
ሦስት አመታት ድርጅቱ የፈፀማቸውን የውጪ ኮንትራት
ውሎች በዝርዝር ይዟል። በዚህ ሰነድ “የውጪ
ኮንትራት” (Foreign Contract) በሚል ርዕስ ስር፤
የውል ቁጥር፣ የውል ዓይነትና ሁኔታ፣ የተዋዋለው
ድርጀት ስምና አድራሻ፣ የኮንትራቱ ዋጋ እና የአከፋፈል
ሁኔታ፣ ውሉ የተፈረመበት እና የፀደቀበት ቀን፣… ወዘተ
ከላይ በተጠቀሰው የሰነድ ማስረጃ መሰረት ሜቴክ
እ.አ.አ. ከ2010 – 2012 ዓ.ም ባሉት ሦስት አመታት
ውስጥ ብቻ 244 የውጪ ኮንትራቶችን ፈፅሟል።
ከእነዚህ ውስጥ 189 የውጪ ኮንትራቶች የሚከፈለው
ዋጋ በዶላር ወይም ዩሮ ተገልጿል። በኮንትራቱ ዋጋ
ያልተገለፀባቸው 55 የውጪ ኮንትራቶች ያሉ ሲሆን
ከእዚህ ውስጥ 48ቱ ኮንትራቶች የተፈረሙበት ቀን
ተገልጿል። 4 ኮንትራቶች አለመፈረማቸው የተገለፀ
ሲሆን የተቀሩት 3 ኮንትራቶች ደግሞ መፈረም ወይም
አለመፈረማቸው አልተገለፀም። የዋጋ መጠናቸው
ከተገለፀባቸው ኮንትራቶች ውስጥ 179 ኮንትራቶች
መፈረማቸው የተገለፀ ሲሆን 6 ደግሞ አመፈረማቸው
ተገልጿል። የተቀሩት 4 ኮንትራቶች ደግሞ መፈረም
ወይም አለመፈረማቸው አልተገለፀም
2018-12-05 Mohammed Nasir	Leave a comment
Toonsiliin qaama keenyaa keessaa
waan akka gumaa foonii ulaa
qoonqoo keenyaa keessatti argamu
yoo ta’u, xuraawaa fi jarmoonni
garaa garaa akka gara ujummoo
qilleensaa keenyaatti hin seenne
kan calaalee hambisuuf
Dabalataniis farra jarmootaa illee
oomishuun kan jarmoota nurraa
dhorku keessaa toonsiliin isa tokko.
Yeroo tokko tokko garuu osuma loluu
harka kenna, ofumasaatii iyyuu
infekshiniin isa qabata, waan ta’ee
yeroo kana kan dhukkuba toonsilii
Dhukkubni toonsilii yookan huuba
qoonqoo jedhamu kun kan nama
qabu orgaanizimoota xixiqqoo
keessattuu baakteriyaa fi vaayirasii
irraa yoo ta’u dhukkuba kana
namatti fiduudhaan baakteriyaan
sadarkaa tokkoffaa irratti argamu
Dhukkubni toonsilii baayyinaan nam
ga’eessa caalaa daa’imman kan
Dhukkubni toonsilii yoo nama qabu
mallattoolee hedduu argisiisuu
kanneen keessaa; dhukkubbii
qoonqoo (harsassee), mormi
dhukkubuu, yoo afaan bananii
ilaalan harsasseen garmalee
diimachuu, mataa dhukkubsuu,
dhagna gubuu, nyaata jibbisiisuu,
dhukkubsuu, foolii afanii balleessuu,
xannacha dhiitessuu fi kkf.
Daa’imman irratti mallattoowwan
kana hundaa eeguu hin qabnu,
balaqqamsiisuu fi garaa dhukkubsuu
qofaan of ibsuu danda’a waan
Yaala isaa ilaalchisee sababa
ka’umsa toonsilis sana irraatti
barbaachisuu), qoricha liqimsamuun
yaalamuu, haga tonsilii kutanii
baasuutti kennamuu danda’a.
Dhukkubni kun garmalee waan
daddarbuuf namni dhukkuba
kanaan qabame haga mana yaalaa
deemee fayyutti warra kaanitti
qufa’uu, haxxiffachuu, osoo harka
sirriitti hin dhiqatiin waliin
nyaachuu dhiisun maatii kan biraat
akka hin dabarre gargaara,
Qoricha mana yaalaa nuuf kennam
guutummaatti fudhannee fixuu
baannaan rakkoo biraa irra nu
Rakkoo toonsilii irra darbee qaamot
biraa akka onnee fi kalee irra
miidhaa waan geessisuuf gara mana
yaalaa deemuun dirqama.
Baga nagaan dhuftan! Gara fuula marsariitikeenyatti.
Baacoo/ Tapha gabaaboo
Amaloota jaalala fayya qabeessa fidan kurnan (10)
Laamsha'uu qaama saala dhiiraa/Erectile dysfunction/
Bantuu Iccitii (Security Code) Moobaayila Keessanii Yoo Dagattan
Dhiironni tokko tokko qaama saala isaanii furdifachuu eegalan
Manni hidhaa magaalaa Jijigaa keessaa Robotii nama tumuu fi barcuma Elektirikii irratti nama dararan qaba
Dhukkuba Tiruu/Dhukkuba Simbiraa
Faayidaa Muuzii nyaachuun qabu
Faayidaa bishaan dhuguu
Categories Select Category Aadaa Afoola Animals Anime Art Ayyaana Book Business Car City Computer Culture Destop Family Fantasy Fashin Fayyaa Food and Drink Gadgets Game Geometric Health Health and Beauty Holyday Home Internet Kids Love Movies Music Nature Neutral News Oduu People Politics Quotes Science . Seenaa Siyaasa Software Space Sport Technology Teeknologii Teeknolojii Uncategorized Wolaloo
Archives Select Month January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 February 2017 December 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016